chanmyae၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် ဓမ္မမိသားစု၏ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းအတွက် ကုသိုလ်ဖြစ် ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါရန် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း
၂၀၁၃ - ဧပြီလတစ်လတာအတွက် အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆောင်းပါးပိုစ့်ဆုရှင် ကြေငြာခြင်း
"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူး)
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများသည်(လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ) ကင်းကွာပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဓမ္မများကို(ရှာဖွေ၊ဆွေးနွေး၊လေ့လာ၊)နိုင်ကြပါစေသတည်း။(ကောင်းမြတ်မင်း)
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိကြကုန်သော... ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ... အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ... ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအားလုံး... ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးကိုယ်စား... ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်မင်းမှ ... ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများအားလုံးနှင့် (၃၁)ဘုံတွင်ရှိကြကုန်သော... သတ္တ၀ါအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာကြပါစေ... သတ္တ၀ါတိုင်းတရားကိန်းငြိမ်းအေးနိုင်ကြပါစေ...
MaleyangoonMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ chanmyae's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
chanmyae liked ကောင်းမြတ်မင်း's group ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်(သာသနာဟိတအသင်း)Aug 13, 2012chanmyae ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Aug 12, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
နိုင်ရန်အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်......အေးချမ်းစွာ တရားဓမ္မ များကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါစေ....။ RSS
1:03am အချိန်August 13, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
မေတ္တာပို့ရန်နေရာနှင့် (ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာပရဟိတအဖွဲ့ )
created this Ning Network. Android phone (ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ)
နေရပ်လိပ်စာ =အမှတ်(733)၊ကုန်းဘောင်(၁၆)လမ်း။ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ငွေလွှဲပို့ လှူဒါန်းရန် လမ်းညွှန်= Account No.0451210053098(Kan bawza bank ltd.Botahtaung)
Name of Account. U HLAING KYAW HTWE
NRC/CRC No(s).12/AUKATA(N) 148171 သို့တိုက်ရိုက်လွှဲပို့၍ဖြစ်စေ
ရန်ကုန်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းမပေါ်ရှိ ရိုးမဘဏ်(ကျောက်တံတား ဘဏ်ခွဲ) သို့
လှိုင်ကျော်ထွေး ၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်.12/ဥကတ(နိုင်) 148171 ၊ ဖုန်းနံပါတ် . 09420251552 လိပ်မူပေးပို့၍ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း နိုးဆော် အသိပေးအပ်ပါသည်။
mun mun aung
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်တွင်းရှိ ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသားသူများ (မျှဝေဓမ္မဒါနပြုသူများ) သို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာ
ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ
ခန္တီ နဲ့ ဥပေက္ခာ ဘာများထူးခြားသလဲ
ဒါနနဲ့ စာဂဟာ အတူတူပဲလော၊ ဒါနနဲ့ ပရိစ္စာဂ ဘာထူးသလဲ
(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း
မြတ်ဗုဒ္ဓ....ဗောဓိညောင်ပင်.တွင်ပါရမီအစွမ်းဖြင့် " မာရ်နတ် "ကို အနိုင်ယူတော်မူ ၏။
“… ဓမ္မပဒဂုဏ်ရည် …”
တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃
မလှူသင့်သော အလှူဒါန (၅)ပါး
၀ိပဿနာဉာဏ်ပါမှ ဉာဏသမ္ပယုတ် ကုသိုလ်ဖြစ်သလော
သောတာပန် ကာမဂုဏ်ခံစားမှုနှင့် ပုထုဇဉ်တို့ ခံစားမှုဟာ အတူတူပဲ မဟုတ်လား
1. ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာကာကွယ်ရေးစကားစု
2. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။
3. "ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"
4. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
5. အရှင်မောဂ္ဂလန် မထေရ်မြတ်ကြီး အလောင်းတော်, တရားထူးရသွားသော တရားတော်။
6. ၁၃၇၅-ခုနှစ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်မည့်ကျောင်းကို အသိပေးကြေညာခြင်း
7. တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …
8. သောတာပန်၏ ထူးခြားချက်(၇)ရပ်
9. ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်
10. ** ပုရိသတို့အတွက် သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ် **
11. တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ
12. လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား
13. နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်
15. "၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တစ်လတာအတွင်း နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓမ္မဘလော့ဘ်တစ်ပုဒ် ကြေညာခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်"
16. သာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။
17. စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)
19. " မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ရောနှောလောင်းလှူသည့်ဆွမ်း"
20. အရှက်နှင့် အကြောက်
Top News · Everything မူကြိုဆရာ posted blog postsတောင်ဖီလာဆရာတော်နှင့် စက်တော်ရာနှစ်ဆူ ရှာဖွေခြင်းတောင်ဖီလာဆရာတော်၏ သီလဂုဏ်နမော တေ ဂါထာတော်3 more…9 minutes agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ခန္တီ နဲ့ ဥပေက္ခာ ဘာများထူးခြားသလဲ'13 minutes agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)'36 minutes agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'သာသနာမည်သူ ပြုသနည်း'43 minutes agoSoe Gyi shared thein wai's blog post on Facebookပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။59 minutes agoSoe Gyi liked thein wai's blog post 'ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။'1 hour agomun mun aung liked dimplemit's blog post 'ပုညကြိယ၀တ္တု(၁၀)ပါး'2 hours agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂'3 hours agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃'3 hours agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁'3 hours agothuthunaing postedastatus"ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုပါ"4 hours ago 0
ဓနုလေးဖိုးအော် liked မောင်မြင့်'s blog post 'ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ'4 hours ago More... RSS
© 2013 Created by ကောင်းမြတ်မင်း. Powered by
Sign in to chat! ;